Oh.. My Blog!: August 2007
Invitation to Bloggers' Seminar
Posted by Tesla at 3:34 PM | Links to this post
ကိုဘ၀ခရီး ရဲ့ တက်မှုကြောင့်ရေးရခြင်းဖြစ်သော်လည်း အမှန်တော့ ကျနော့်ဘလော့လေးဟာ နောက်လဆို တနှစ်ပြည့်ပြီ ဖြစ်လို့ ပြန်လည်လှမ်းမျှော်ကြည့်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်နေခဲ့ တဲ့ စိတ်ကလေးလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်.
(နဂိုထဲက ကြိတ်ပြီးရေးချင်နေတယ်ပေါ့ဗျာ :P)
ထို့ကြောင့်ပင် ဘာတွေတွေးခဲ့မိသလည်း ဘာတွေရေးမိခဲ့သလည်း အခုလိုအချိန်ကြာလာတော့ စာဖတ်သူတယောက်လို ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အခုဘာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သလည်း ရေးခဲ့တုန်းက ဘာလို့ရေးခဲ့လည်း ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိနေခဲ့ ပါသလဲဆိုတာ (ကဲ- ရေးမှာသာရေးစမ်းပါ :) ) ပို့စ်တိုင်းကို Review ပြန်လုပ်ကြည့်မိတယ်. သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး တော်တော်များများတော့ အခုထက်ထိ ကြိုက်သားဗျ ကိုယ်ရေးတာကိုး. ကိုယ်မကြိုက်လို့ ဘယ်သူကကြိုက်ဦးမှာလည်း. အမှန်တော့ ပို့စ်တခုခြင်းစီကိုတောင် ပြန်လည် စမ်းစစ်ခြင်းဆိုပြီးရေးလိုက်ချင်သေးရဲ့. အခုတော့လည်း ငါးခုပေါ့. ကျနော်ရွေးမဲ့ငါးခုကတော့ ကျနော့်တယောက်တည်း အမြင်ကပဲ ခံစားပြီးရွေးထားလိုက်တယ်. ကွန်မန့်တွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး ခံစားဖတ်ရှူသူ တော်တော်များများ နဲ့ အကြိုက်တူတဲ့ဟာများကို တွေ့သော်လည်းမရွေးမိပါဘူး..။
ကဲကဲ.. အရှေ့ကို လျှောက်ပါလို့ အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်လိုက်ရင်… (နေစူးလိုက်တာ ;) )
ကျနော်တို့လိုက်မှီခြင်းများရဲ့ အလွန် မမြင်ရသေးတဲ့ လိုက်မမှီသေးတဲ့ ဟိုဘက်က ကိစ္စတွေအများကြီးရှိ နေသေးတယ်ဆိုတာကို ခံစားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိကတောထဲက လူရိုင်းတယောက်ကို အီဖယ်မျှော်စင်ကြီး အကြောင်းပြောရင် သူယုံခြင်မှယုံပါလိမ့်မယ် အဲ့လိုပါပဲ ကျနော်တို့ထိမိနေ တွေ့မိနေသေးတဲ့ အရာတွေဟာ စကြာဝဠာကြီးနဲ့ နိုင်းယှဉ်ရင် ဘာမှမဟုတ်သေးပဲ မရောက်ဘူးသေးတဲ့ နေရာတွေ မသိသေးတဲ့ကိစ္စတွေဟာ ပြောမဆုံးအောင် ရှိနေသေးကြောင်း ထိုနေရာတွေကို အရောက်သွားဘို့ သိပွံပညာဟာ ပို့ပေးနိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုပါဝါမျိုးနဲ့ သွားမှသိနိုင်မှာလည်း ဆိုသော...
ခံစားချက်တခုကို မှီငြမ်းရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာ ကျနော်စိတ်အ၀င်စားဆုံးကိစ္စ တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးလို့ နာမည် မတပ်ခဲ့ရဲတဲ့ ဘာသာရေးရှုထောင့် ပို့စ်တခုပါ။ ဒီပို့စ်ဟာ ကျနော်ရေးဘို့ အချိန် အယူခဲ့ရဆုံးသော ပို့စ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကတော့ စာဖတ်သူတွေလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ ဘလော့ စာအုပ်ထဲတောင် ထည့်ပေးကြမယ် ဆိုပဲ။ အခုကျနော်ပြန်ဖတ်တော့ တော်လိုက်တဲ့ ငါလို့တောင် ထင်မိတယ်. ဟိဟိ. ဆင်းရဲ နွမ်းပွားမှု များရယ် မိဘမေတ္တာရယ်ကို ရှုမျှော်ခင်းလှလှ စကားလုံးရွရွနဲ့ ရောယှက်ပြီး ဖွဲ့နွဲ့ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Diary + လို့ဆိုခဲ့သလို ဒိုင်ယာရီလိုစာမျိုးတခုထက် နည်းနည်းကျော်လွန်ခြင်းပါ။ ရေးထားကတည်းက ကိုယ်ပိုင်ညစာဆိုပြီး ကျနော့်အတွက် သက်သက်ရေးပေးခဲ့လို့ ကျနော်အခုထက်ထိလည်း ကြိုက်တုန်းပါပဲ.
စိတ်ထဲ ဖြစ်ပေါ်လာသော အပိုင်းအစ များစွာနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားသော်လည်း ထိုအပိုင်းအစများသည် မောဟတရားအား တရားကျခြင်းဆိုသည့် အခြေခံစိတ်တခုတည်းက ခွဲထွက်ဖြာဝေမှုများ ဖြစ်ကြတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူတွေလည်း အတော်ကြိုက်ကြတယ် ထင်တယ်။ မကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်း အတော်လေး မကြိုက်ပါဘူး။ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့လို့ အပြောခံပြီးတောင် ရေးခဲ့ရတဲ့ ပို့စ်ပါ..။
၄. ထို့ကြောင့်ဤအရာကို… (ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိတော့ပါ)
ကဗျာတွေကိုတော့ ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူးဆိုတာတောင် မရှိသလောက် ပါပဲ.။ ကဗျာဆိုတဲ့အတိုင်း နှလုံးသားထဲက ရေးဖွဲ့ခဲ့မှမှုတွေဟာ ရာခိုင်နှုန်းများပြားတဲ့ အတွက် ဖတ်ပြီး မခံစားရတဲ့ ကဗျာမျိုး ကျနော့်မှာ မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်း ကဗျာအရာမြောက်ခြင်း မမြောက်ခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး.။ ကျနော်ရေးခဲ့သောကဗျာ များဟာ ကျနော့်တယောက်ထဲအတွက်တော့ လွန်စွာရသမြောက်အောင် ပေးခဲ့ကြတယ် လို့ ပြောခြင်တာပါ. တခုရွေးရမယ် ဆိုတော့ကာ အခုကဗျာလေးဟာ နှလုံးသားနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ ရသအမြောက်ဆုံး ကဗျာလေးများ ဖြစ်နိုင်မလားလေလို့တော့ ထင်လိုက်မိတာပဲရယ်..။
ရေးခဲ့ရ တွေးခဲ့ရတဲ့အထဲမှာ အရသာအရှိဆုံးပါပဲ. ပုံမှန်ရေးဖွဲ့မှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ အတွက်လည်း အရသာရှိမိပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်များ တခုခြင်းဆီက ခံစားချက်တခုခြင်းဆီ ပေးပါတယ်။ အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာလည်း ခပ်ကြီးကြီး ရသတခုထပ်ပေးခဲ့ တဲ့အတွက် အရသာရှိမိပြန်တယ်။ ဟုတ်ပါ့ ကိုယ့်ဟာကို ကွန်မန့်ပေးပြီး ချီးကျူးနေတာ.. အဲ့လို အမြင်ကပ်လည်း ခံရဲပါတယ်.. ကျနော်သိပ်ကြိုက်လို့ပါ..။ မေခ ကိုတောင်လွမ်းမိတယ်ကွယ်….။
အမ်.. ပြည့်ပြီလား ငါးချက်.. ဒီမှာ ရွေးကောင်းတုန်းရှိသေး.. ဟဲ.. ဟဲ…..
Posted by Tesla at 12:22 PM | Links to this post
ဓါတ်ဆီထုတ်ဈေး နှစ်ဆမြင့်စေ။ ဂက်စ်ကို ငါးဆမြင့်စေ။
ဂုဏ်ယူပါတယ် ဘဘဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ခင်ဗျာ-
နိုင်ငံအရေးကို စစ်တိုက်သလို ၀ုန်းဝုန်းဒိုင်ဒိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲတဲ့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘဘဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ခင်ဗျာ-
ပြည်သူတွေကို ငါတို့လိုပဲ သုံးဖြုန်းနိုင်တယ်လို့ အထင်ကြီးပေးတဲ့ အတွက်
နိုင်ငံတော် ဆင်းရဲနေပြီလို့ အခုလို သိသိသာသာ အင်ဒါရိုက်
ကြေငြာပေးရဲတဲ့အတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိလာလို့
ဘာများဝမ်းနည်းစရာ ရှိမှာလည်းခင်ဗျာ နိုင်ငံသားပိုင်တဲ့
သူ့ဆီက အခွန်မကောက်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒါမှ နိုင်ငံတကာမှာ မတရား မဟားတရား ချမ်းသာတဲ့ ပြည်သူတွေ
ရှိပါတယ်လို့ ပြောလို့ရမှာ မလား။
ဟိုး.. ရှေ့က ပျံကျဈေးသည်ဆီက အခွန် လိမ့်ကောက်ပါခင်ဗျာ-
သူတို့ အရင်းပြုတ်မှ နိုင်ငံဟာ ပျံကျဈေးသည် မရှိဘူးလို့ ကြေငြာလို့ ရမှာမလား။
လူမနေတဲ့ နေရာမှာ မီးတွေ ထိမ်ထိမ်လင်းအောင် ထွန်းထားပေးပါ.
ဒါမှ တိုင်းပြည်ဟာ စိမ်းလမ်းဆိုပြေ အေးချမ်းသာယာဝပြော လူမရှိတာတောင်
မီးထွန်းထားနိုင်တယ်လို့ ကြေငြာလို့ ရမှာ မဟုတ်လား။
ပညာကို တန်ဘိုးမထားတတ်အောင် နည်းလမ်းထပ်ရှာပါဦးခင်ဗျ.
ပညာတတ်ရင် လူရေလည်လာပြီး လူကြီးတွေ လုပ်နေတာကို
ဟိုဟာမကောင်းဘူး ဒီဟာ မကောင်းဘူး ပြောလာကြမယ် မလား။
အဲ့နေရာတွေကို ဆီတွေခပ်ထူထူသာ လူးထားပေးပါခင်ဗျား..
အခု မယောင်သေးပေမဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတော့ အောင်ပွဲဝင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။
ကဲ.. ပြည်သူများ ပြည်သားများ ခင်ဗျား ပျော်ပျော်နေကြပါခင်ဗျား.
ကျနော်တို့ တဖြေးဖြေးနဲ့ နီးလာပါပြီ.
သေခါနီး.. အဲလေ.. သာယာရွှေပြည်ကြီး နဲ့ပါခင်ဗျား...။
မနေ့က ဘတ်စ်ကားစီးကြတဲ့ လူတွေကော ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်တယ်
ညည်းကြလို့ကော စိတ်ထဲမကောင်းလို့ ရေးမိပါတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by Tesla at 11:54 AM | Links to this post
I. FUTURE TENSE
Life Is Funny Emotion
III. PRESENT TENSE
Thank you MARIO! But, Our Princess Is In Another Castle!
Posted by Tesla at 11:05 AM | Links to this post
TarYar MinWai ( Poet ) ( 13/9/1966 - 5/8/2007 )
Posted by Tesla at 1:27 PM | Links to this post
ဘာကြောင့် ဘလော့ရေးပါသလဲတဲ့. မေးသင့်မေးထိုက်တဲ့ မေးခွန်းတခုဖြစ်ပါတယ်. ကျနော့်ကို ကိုဖြိုးက အဲ့အကြောင်း ရေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ အဲ တက်တယ်ပေါ့ဗျာ ထို့ကြောင့် ကျနော်ဘာလို့ ဘလော့လည်းဆိုတာ ရေးလိုက်ပါတယ်.
ခံစားချက် အဆိုးတွေ အကောင်းတွေ မျှဝေခံစားခြင်လို့ ရေးပါတယ်။
အနုပညာ သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ထိတွေ့ခွင့် ရတဲ့အတွက် ရေးပါတယ်။
ဖန်တီးနိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး ရလို့ ရေးပါတယ်။
စာရေးရတာ ၀ါသနာပါလို့ ရေးပါတယ်။
အမှန်တော့ အဲ့မှာတင် ဇာတ်လမ်းပြတ်ပါတယ်. သို့သော် ဘလော့ဂါဆိုတော့လည်း ထပ်ကွန့်ပြီးရေးရပါဦးမယ်. ထိုအကြောင်းကို အကြယ်ချဲ့၍ ထပ်မှန် လျှာရှည်ရမည်ဆိုပါက…
တကယ်တော့ ကျနော် မဘလော့ခင်အချိန် အတော်ကြာကတည်းက ဘလော့ဆိုတာနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တာ ကြာပါပြီ. ဘယ်လိုကြာသလဲဆိုတော့ ကျနော့်ညီမလေး တယောက်က ရေးနေခဲ့တာကို အမြဲတမ်း သွားဖတ်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်. ဒီလိုနဲ့ပေါ့ဗျာ ကဗျာရေးပွဲ တခု သူကလုပ်တော့ အစ်ကိုလည်း ရေးရပါမယ်တဲ့ ဘလော့မရှိတဲ့ အတွက် သူ့ကွန်မန့်ထဲမှာ ဒါမှ မဟုတ် အီးမေးနဲ့ ပို့တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပါဆိုတာနဲ့ ကျနော် ဘလော့တခုစလုပ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်က မြန်မာလိုလည်း မလုပ်တတ်တော့ စကယ်ဖတ်ပြီးတင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း လုပ်လက်စနဲ့ ဆက်လုပ်လိုက်တော့မယ် ဆိုပြီး ရေးရင်းက မြန်မာလို ရေးတာကို ဟိုကြည့်ဒီကြည့် (ကိုညီလင်းဆက် ဆီက ကြည့်လုပ်ခဲ့ပါတယ်) လုပ်ရင်း လုပ်တတ်သွားပါတယ်။ လေးငါးခုလောက် ရေးပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ဘလော့ရေးခြင်းကို နှစ်သက်သွားပါတယ်။
စာရေးရတာကို ၀ါသနာပါတဲ့ဗီဇအရကြောင့် ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ အဓိကနေရာက ပါဝင်ပါတယ်။ စာရေးတာဝါသနာပါတာနဲ့ ဘလော့ရေးရောလား ဆိုတာလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကိုယ်ရေးထားတာကို အလျင်အမြန် ရီအက်ရှင် (Reaction) ရသောကြောင့်ရယ် (Interact) ဆိုသည့်အချက်ရယ် ပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုရေးနေရတာပဲ ပျော်တယ် ခံစားရတာတွေလည်း Share မလုပ်ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဘလော့ရေးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ ဒိုင်ယာရီလိုမျိုးနဲ့ ကောင်းတဲ့စာမျိုး အာရုံလာတဲ့စာမျိုး စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တာမျိုးဆို မဂ္ဂဇင်း တွေကိုပို့တာမျိုးပဲ လုပ်မိပါလိမ့်မယ်။ ဘလော့ခြင်းရဲ့ အရသာဟာ အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူတို့၏ သဘာဝအရ ခံစားမိသော အကြောင်းကိစ္စ များဟာ အချိန် ၀င်ရောက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာနဲ့ အမျှ ပေါ့သွားနိုင်သလို လေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ပေါ့သွားခြင်းလေးသွားခြင်း ဟာ ဦးနှောက်က နေရာဝင်ယူမှု များပြားလာခြင်း အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ပိုမို ကောင်းမွန်သော စာများထွက်လာနိုင်သော်လည်း ဦးနှောက်၏ တည်းဖြတ်ခံထားရသော စာများဖြစ်သွားပါပြီ။ ပုံမှန်အရမူ ဘလော့ရေးခြင်းမှာ ထိုကဲ့သို့ စာမျိုး တွေ့နိုင်ရန်ရှားပါတယ်။ ကျနော်ကြိုက်နှစ်မိသည်မှာ ထိုအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချက် ၏ ဆိုးကျိုးကား စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းရေးခြင်း ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တခါတရံ သူတပါးကို စော်ကားမိသလို မျိုးနဲ့လည်း ညိသွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဘလော့အကြောင်း သေသေချာချာ နားလည်သူများ နှင့် လူတို့၏မူလဗီဇကို သဘောပေါက်ပြီးသူများအတွက် ကတော့ ပြန်လည် စမ်းစစ်မိနိုင် လက်ခံနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအချက်ကြောင့်ပင် စာရေးခြင်းအား ၀ါသနာ မပါသူများ ပင် လျှင် ဘလော့ရေးသည် ဆိုသည့် အချက် ဖြစ်ပေါ်လာသည် ထင်မိပါတယ်။ ထို့အပြင် ခံစားချက်များအား တယောက်နှင့်တယောက် ဝေမျှသည့်အတွက် မိမိခံစားနေရသည့် ဆိုးကျိုးများလျှော့သွားသလို ကောင်းတာကြတော့ ပိုမို ပီပြင်လာပါတယ်။ မျှဝေခံစားခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယူတတ်ခဲ့လျှင် အနုပညာ အပြင် စိတ်ထားပြည့်ဝသူ တို့၏အတွေးများ ကောင်းမွန်ပါးနပ် စွာ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနေကြသူများ ၏ အလေ့အထများ ကိုလည်း လေ့လာ အားကျခွင့်ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ တွေများတဲ့အတွက် (လုပ်ငန်းပုံစံတွေပါတူတဲ့ လူတွေများပါတယ်) သတင်းအချက်အလက် နဲ့ နည်းပညာတွေဟာလည်း ကိုယ်နဲ့ ပိုမိုအံဝင်ဂွင်ကျ ရှိစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ချက်က စိတ်ထွက်ပေါက် အပန်းဖြေမှုဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ နေ့တဒူဝ အလုပ်တွေ လုပ်နေကြရတဲ့ အတွက် လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ထွက်ပေါက်တခုဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ မကောင်းမှုတွေ ဖြစ်ဘို့ ရာနှုန်း တော်တော် များပါတယ်။ ဥပမာ ဘီယာတို့ အရက်တို့ မူးယစ်ဆေးဝါးတို့ အထိပါပါတယ်။ ဘလော့ရေးခြင်းသည် စိတ်အပန်းဖြေမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသလို စိတ်ထွက်ပေါက်အဆင့်ထိ ရောက်အောင်တောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (ဟိုက် ရေးနေတာ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်) ဟုတ်ပါတယ် အခုလိုမျိုးပါပဲ ဘလော့ရေးခြင်းဟာ အချိုးအစား မကျပဲ အဲ့ဒီလို ဟိုရောက်ဒီရောက် ရောက်သွား တတ်ပါသေးတယ်။ ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ ဆိုပေမဲ့ သေချာပြန်စမ်းစစ်လျှင် စာများဟိုရောက် ဒီရောက် ဖြစ်ခြင်းထက် စိတ်၏ သဘာဝအရ ဆက်စပ်ရောက်သွားခြင်းသာ လျှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဘာလို့ ဘလော့ရေးရတာ နှစ်သက်ခဲ့ပါသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်အတွက် အပေါ်က ဟိုရောက်ဒီရောက်များ အားလုံး အကြုံးဝင်ပါတယ်။ ကောင်းတာရှိသလို ဆိုးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထိုအထဲက စိတ်အခန့်မသင့် သောအချိန် တွင်မှ ဆိုးကျိုးများကို ခံစားမိတဲ့အခါ ကျပြန်တော့ ဘလော့ရေးရတာကို စိတ်ကုန်ခဲ့မိပါသေးတယ်။
လူဆိုသည်မှာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စဉ်းစားပုံခြင်း ခံယူချက်ခြင်း တူညီနိုင်ရန် အင်မတန် ခဲရင်းပါတယ်။ အပေါ်က ရေးထားခဲ့တဲ့ ဆိုးကျိုးတစ်ခုလိုပါပဲ ဘလော့ရေးခြင်း သည် ဦးနှောက်၏ တည်းဖြတ်ထားမှု အလွန်တရာမှ နည်းပါးလှသည့် အတွက် အခန့်မသင့် ဖြစ်ခြင်းများ သည် အလွန်တထောင် များပြားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ရှင်းရှင်းနဲ့ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပဲ ဆိုသလို ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ခံထားရသော အနုပညာရှုထောင့် အရ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောခွင့်ရလျှင်မူ ခံစားမိသည်ကို စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း စာရေးခြင်းဟာ ပို့စ်မော်ဒန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ တံဆိပ်ကပ်ချင်မိပါတယ်။ (ဟုတ်ကဲ့ အသလွတ်ကြီးပါပဲ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ကျနော့်အမြင်သက်သက်ပါ) အဲ့ဒီလို ကျနော့်အမြင်သက်သက်ပါလို့ ပြန်ဖာထေးရသလိုမျိုးပါပဲ။ လူတို့သည် အရှိအတိုင်း ပြန်လည်စမ်းစစ် လက်ခံနိုင်သော (သို့) အနိမ့်ဆုံး အဆင့်အရ ရိုးစင်းစွာ စဉ်းစားပေးသော ယဉ်ကျေးမှု အရမ်းကာရော မထွန်းကား သေးပါဘူး။ ထိုအခါ .. ထိုအခါ ဘာဖြစ်ရောလည်း… ဟုတ်ကဲ့ ပြဿနာ ဆိုသည့် အရာများ ကြီးထွားဖွံဖြိုး ဥာဏ်ရေ တိုးလာပါတော့တယ်။ သက်သေပြချက် ချပြပါဆိုရင်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရေးသားမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ် ခဏလောက်ခွင့်လွတ်ပါတော့. ကျနော်တို့ မြန်မာ ဘလော့လောကမှာ ထားပါတော့ ခေတ်ဟောင်း ခေတ်သစ်ပေါ့ဗျာ ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ကိုညီလင်းဆက်တို့ မမေဓါဝီတို့ ကိုကလိုစေးထူးတို့ မနိုင်းနိုင်းစနေတို့ ကိုမောင်လှတို့ ပြဿနာ ဖြေရှင်းရမှုတွေနဲ့ တယောက်မှ မကင်းခဲ့ကြပါဘူး အခုဆိုလည်း ကျော်ကြားစ ပြုလာတဲ့ ကိုရန်အောင်တို့ ကိုဖြိုးတို့ ကိုစိုးဇေယျတို့ မဂျစ်တူးတို့ လည်း အတုအစစ်တွေနဲ့ ရောရောနှောနှော လိမ့်ခံနေကြရလေရဲ့။ ပထမဘလော့ဂါ စစ်ပွဲဆို အဖြူရောင်တွေ အမည်းရောင်တွေ စီဗောက်တွေက ကျဉ်ဆံသံ တ၀ီဝီနဲ့ပေါ့ ဒုတိယစစ်ပွဲဆို လူ့ယာဉ်ကျေးမှုနဲ့ မာနတွေနဲ့ အငြိုးအတေးတွေနဲ့ တခြားတခြားသော စစ်ပွဲအသေးစားလေး တွေကလည်း ကျိုးကျား ကြိုးကြား နယ်ပယ်ခြားခြင်းတွေကော ရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့။ ထိုကိစ္စများ အားလုံးသည် လူတို့၏သဘာဝအရ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကစာကို ပြန်ကောက်ပါတယ်။ ရိုးစင်းစွာ စဉ်းစားပေးသော ယဉ်ကျေးမှု အရမ်းကာရော မထွန်းကား သေးပါဘူး။ နားလည်ပေးမှုတွေပေါ့ဗျာ။ ကဲ နောက်ထပ် လက်တွေ့ သရုပ်ပြသရလျှင်မူ အခု ရေးနေတာ ကို ဖတ်နေရင်းနှင့် ပင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကွာ မင်းကဘာကောင်လည်း လို့ အခုစာဖတ်သူ တွေးနေမိတယ် ဆိုတဲ့အချက် ကိုသက်သေပြခြင်ပါတယ်။ (လက်တွေ့ လက်တွေ့ .အဲ့လို လက်တွေ့ ပြချင်လို့ အပေါ်ကစာကို တမင်တကာရေးထားတာ ဗွေမယူကြပါနဲ့ဗျို့ :P) ကျနော်သည်လည်း စာဖတ်နေသူဆိုလျှင် တွေးကောင်း တွေးမိပါလိမ့်မယ် (တို့က တရားမျှတတယ်နော် :P)။ ထိုအခါ ဘလော့ရေးရတာ ကျနော်စိတ်ညစ်လာပါတော့တယ်။ အမှန်တော့ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အပေါ်ကကျနော်ရေးထားသလို လူတွေရဲ့ ဗီဇကို နားလည်ပေးနိုင် တဲ့အချက် မှာ ကျနော် ပြန်ညိသင့်ပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင် ဆိုတဲ့ စကားပုံတွေနဲ့ပဲ. အဲ့လိုစဉ်းစားမိပြန်တော့ ဘလော့ရေးရတာ စိတ်ကုန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးက အဝေးထွက်ပြေး သွားပြန်ပါတယ်. ဒီတော့ စိတ်ရှိလက်ရှိ စာရေးမိသည့် သကာလ နောက်ထပ် မေးခွန်း ထပ်ထွက်လာပါတော့တယ်။
ဘလော့ရေးခြင်းသည် ထားသင့်သည့် စိတ်ခံစားမှု ပုံမှန်ထက် ကျော်လွန်နေသော အလုပ်ထိခိုက်စေလောက်သည့် စိတ်စွဲလန်းမှုတခုလား?
ဒါ အရေးကြီးပါတယ်. ဘလော့ရေးခြင်းကို မထိမ်းချုပ်တတ်လျှင် ချက်တင်းကဲ့သို့သော အချိန်ကုန် လူပန်း ပြန်လည် ပျောက်ပျက်သွားမည့် ခဏတာ သာယာပျော်ရွှင်မှု ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို/အခြေအနေကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့ စာတွေရေးတာကတော့ သူများအတွက် အကျိုးရှိတယ်ပဲ ထားပါတော့ ကိုယ်ကတော့ အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် နဲ့ စိတ်ထဲမှာ အမှိုက်ရှုပ်တာပဲ သက်သက် ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုရင်လည်း ဘလော့ရေးရတာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ စိတ်အပန်းဖြေရန် ဆိုတဲ့ အချက် ကြေပျက် သွားပါပြီ။ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိတာတွေ ကြီးပဲ ရေးပေးရလို့ ကိုယ်က ဖျော့တော့တော့ ကျန်ခဲ့တာမျိုးဆိုရင်တော့ တမျိုးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ အဲ့တာက စာရေးဆရာစိတ်ဓါတ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ပင်ပန်းလှပါတယ်။ ကျနော်က စာရေးဆရာမဟုတ်တော့ သူများအကျိုးရှိမဲ့စာတွေ ချည်းရေးဖြစ်တယ်ဆို တာကတော့ မဖြစ်နိုင်သေး ပါဘူး။ အရေအချင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒီတော့ကား အပေါ်က အချက်မှာ ငြိတွယ် နေပြီလားဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ခဏခဏ ပြန်လည် သုံးသပ်ရပါတော့တယ်။
ဘာပဲပြောပြောလေ အရှင်းဆုံးကတော့ ဘလော့ရေးခြင်းကို ကျနော်နှစ်သက်တဲ့ အတွက် ကျနော်ဘလော့ ရေးပါတယ်။ ဘလော့ရေးနေကြတဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရတာလည်း နှစ်သက်ပါတယ်။ လူတယောက်မှ မရှိပဲနဲ့ ကျနော်ဘလော့ရေးရတာ အဓိပ္ပါယ် ရှိမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျနော့်စာတွေကို လာဖတ်နေတဲ့ လာဖတ်မိတဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေကို ကျနော် အမြဲ ကျေးဇူးတင်နေတယ် ဆိုတာကတော့ မလွှဲပါဘူးခင်ဗျ။
တချို့တွေက ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကို ဖင်ခုထိုင်လို့
တချို့ကတော့ စိတ်တွေကို ဆွဲဆန့်လို့
စိတ်ထဲရှိတဲ့ စာမှန်သမျှ ဟာ ရိုးသားတယ်၊
ဒီတော့ ခပ်လွယ်လွယ် လော့ဂျစ်တခု
ငါတို့ ရင်ဘတ်နဲ့ပဲ တွေးပြီး ဘလော့တယ်...။
ကိုဖြိုးဆီမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။ ဒီကဗျာအတွက်ကော အပေါ်က တချို့ အချက်အလက် တွေအတွက်ကော အဆိုးမြင်တယ် ထင်ရင် ဗွေမယူကြပါနဲ့ ခင်ဗျ တောင်းပန်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဗီဇစိတ်ဓါတ်ကို ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူဆိုတော့က အဲ့ထဲမှာ ကျနော်လည်းပါ ပါတယ်။
ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ မြန်မာဘလော့လောက တခုကို အားလုံး ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by Tesla at 11:50 AM | Links to this post